इजलासमा चोलेन्द्रको प्रश्न : जनमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिनँ भन्यो भने के गर्ने ? प्रधानमन्त्री संसद्‌मा के भनेर जानुपर्थ्यो ?
संसद् विघटनविरुद्धको रिट असंवैधानिक भन्दै अधिवक्ताहरूले बहस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बहसमा सहभागीहरूलाई जनमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिनँ भन्यो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
उनले संसद् विघटनअघि संसद्‌मा प्रधानमन्त्री के भनेर जानुपर्थ्यो भन्ने अर्को पनि प्रश्न गरेका छन् । ‘जनमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिनँ भन्यो भने के गर्ने ?’, इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्न थियो ।
सरकारबारे प्रधानन्यायाधीश राणाले सवाल गरेपछि अधिवक्ता रुद्र शर्माले उनलाई जवाफ दिएका छन् । ‘हाम्रो संसदीय प्रणाली संविधानमा आधारित हो । संविधानमा सरकार चलाउने कुरा नै छैन,’ उनले भने ।
बहसमा सहभागी अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश राणालाई संसद् विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका छन् । बहसमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, रुद्र शर्मालगायतले बहस गरिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १०, २०७७, १२:४८:००